Malta oo Gacanta ku Dhigtay Somali Daroogada iibin jiray – Radio Daljir
Malta oo Gacanta ku Dhigtay Somali Daroogada iibin jiray
Maarso 14, 2016 7:41 b 0
Bacaadweyn, Maarso 14, 2016 (Daljir) —Wargeyska Times of Malta ayaa qoray in maanta Maxkamadda la soo taagayo Nin Somali ah oo ka mid ah Koox isku xiran oo ka ganacsata noocyadda Daroogadda.
Hadal ka soo baxay Boliska Malta ayaa lagu sheegay inay maalmihii ugu dambeeyey ay gacanta ku soo dhigeen 15 qof oo ku eedeysan inay isticmaalaan, soo dejiyaan kana ganacsadaan noocyadda khatarta ee Maan-dooriyaasha.
Ninka Soomaaliga iyo 13 kale ayaa lagu xiray magaalladda Paceville ee Galbeedka Malta, kadib, markii lagu qabtay iyagoo isticmaalayey kana ganacsanayey Daroogadda, gaar ahaan Koka’iin, Xashiishka iyo nooca budada ee ay Daroogistayaasha isaga duraan Xididka.
Eedeysanaha Soomaaliga waxaa lala qabtay Eedeysanayaal kale oo u kala dhalatay dalalka Malta, Ireeland, Nigeria iyo Gambia.
(Dhagayso) WAR-DAG-DAG AH: Shabaab oo la shiray Odoyaasha Garacad, Wadooyinkii magaalada xiray
AMISOM:Waxan u nimad in Somalia Aan ka xoreynno Al-shabaab